Bayaan uu soo saaray Ra�iisul Wasaare Gaas oo kaga hadlay arrimo dhowr ah. Soomaalinews.com 09 Aug 12, 16:19
Ra�iisul Wasaare Gaas Bayaanka uu soo saaray Caawa waxa uu kaga digay in la isku dayo In la carqaladeeyo howlaha Doorashooyinka iyo Dowladdnimada, isagoo rajo ka muujiyey haddii taasi la helo in Dadka Soomaaliyeed si siman u tartami karaan. Sidoo kale Ra�iisul Wasaare Gaas waxa uu meesha ka saaray in faragelin ay ku hayaan guddiga Farsamada soo xulista Baarlamanak Cusub iyo howlaha Saxiixayaasha Road Map-ka. Ugu danbeyntii Magaalada Muqdisho waxaa ka socda u diyaar garowga Doorashada Madaxtinimada Soomaaliya taasoo guud ahaan siyaasiyiinta Soomaalida mashquul fara badan ka dhigay si ay ugu diyaar garoobaan 20-ka Agoosto oo maalmo kooban ka haray. Gasho xayeeysiin FREE ah iibka.com ©2008 soomaalinews.com admin@soomaalinews.com :TEL: 00442081800698